नेयमार, पीएसजी र नियती ! - Khelpati
नेयमार, पीएसजी र नियती !
बुधवार, श्रावण २८, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
एजेन्सी । धेरै मानिस एकपटक यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिन्छन्, जब उनीहरु इतिहास बनाउने वा इतिहासमै हराउने सामर्थ्य राख्दछन् ।
जब सपना र हैसियतको युद्ध हुन्छ, जब हामी विकल्पै विकल्पको मैदानमा पुग्छौ । त्यसबखत समाईने एक पाईलाले जीवन निर्धारण गर्दछ ।
ब्रजिलियन स्टार नेयमार अहिले सोही अवस्थामा छन् ।
२१ औँ शताब्दीका फुटबलर जसले धेरै बाचा गरेका छन्, सानैदेखि फुटबलको नशा आफुमा चढाएका छन् । जो सबैको नजरको केन्द्रबिन्दु छन्, उनै नेयमार आफ्नो जिवनको महत्वपूर्ण बिन्दुमा छन् ।
उनी युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा निरन्तर एउटै बिन्दुमा घुमिरहेका छन् । उनी एक पटक यस प्रतियोगिताका विजेता त हुन्, तर उनलाई त्यसबेला दक्षिण अमेरिकी मित्रद्वय लियोनेल मेस्सी र लुइस सुआरेजको साथ थियो । अघिल्ला दुई पटक उनलाई लिगको बिजेता बन्न भाग्यले समेत साथ दिएन ।
सन् २०२० को तेस्रो प्रयास उनका लागि कत्तिको भाग्यशाली छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । अबको ३ खेलले उनको भाग्य दर्शाउनेछ ।
‘यो वर्ष उनले आफ्नो जादु देखाउन सक्छन् । अबका ३ खेलले सबै निर्धारण गर्नेछ । मलाई लाग्दैन नेयमारले फेरी यस्तो अवसर हात पार्नेछन् ।’ ब्रजिलियन फुटबल पत्रकार फर्नाण्डो कलास भन्छन् ।
‘खेल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती’
सन् २०११ जुनमा कतारका लगानीकर्ताले पेरिसको क्लबमा लगानी गरेपछि उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य भनेकै युरोपको महादेशिय फुटबलमा राज गर्नु थियो ।
घरेलु रुपमा यो समय पेरिसका लागि निकै फलदायी रह्यो । उनीहरुले ७ पटक लिग जित्दा ५ पटक फ्रेन्च कप जिते । यस्तै ६ सिजनमा ४ 'ट्रेबल' उपाधि जित्न सके ।
युरोपको सर्वाधिक ठुलो प्रतियोगितालाई साँचो मान्ने हो भने पेरिस क्लबले अझैसम्म त्यसको चाबी खोज्न सकेको छैन । उनीहरुले ७ पटक प्रयास गरिसकेका छन् । तर हरेक पटक उनीहरुले केबल हार भोगे, अन्तिम पटकका भन्दा नमिठा हार ।
सन् २०१७ अगस्टमा बार्सिलोनाबाट विश्व कीर्तिमानि मुल्य २ सय ६३ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर पेरिसले नेयमारलाई अनुबन्ध गरेको थियो । उनलाई अनुबन्ध गर्नुको मुख्य उद्देश्यनै च्याम्पियन्स लिग जित्नु थियो ।
नेयमार त्यसपछि मेस्सी र स्वारेजको सहयोगीबाट आफ्नै यात्राका चालक भएका छन् । उनले अब उत्कृष्ट हुने यात्राका लागि ‘लाइसेन्स’ पाएका छन् ।
तर नेयमारको यो अनुबन्धनलाई कसैले ‘गेम चेन्जर’को रुपमा लिने गरेका छन् । कलास समेत सोही भनाइलाई साथ दिँदै सो अनुबन्धलाई ‘फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती’को संज्ञा दिन्छन् ।
पेरिस आएको ३ बर्ष भएको उपलक्ष्यमा नेयमारले लेखेका थिए, ‘यो सबै जानजान आएको हो, म आफ्नो इच्छाले यहाँ आएँ । मैले यहाँ खुशीका समय बिताएको छु । र केही दुखद पनि ।’
उनले पेरिसका समर्थकको मन जिते, तर बिस्तारै उनी घृणित बने र अहिले उनले समर्थकसँग औसत सम्बन्ध बनाएका छन् ।
गत सिजन बार्सिलोनाले नेयमारलाई क्याम्प नाउ लैजान चाहेको थियो । तर त्यो प्रयास बिफल बन्यो । यसले पेरिसमा नेयमारको सम्बन्धलाई झनै तताइदिएको थियो ।
प्रेम–घृणाको यो चक्र सन् २०१९–२० मा चरम बिन्दुमा देखिएको थियो । उनलाई समर्थकहरुले खेल अवधिभर गाली–गलौज तथा अपशब्द प्रयोग गरे । तर खेल सकिन केही समय बाँकी रहँदा उनले ‘बाइसाइकल किक’बाट विजयी गोल गरे । तब आधा समर्थक उनको प्रशंसा गर्न थाले भने आधा मौन बसे ।
त्यसपश्चात पेरिसको यो शीतयुद्ध भविष्य राम्रो गराउन वर्तमान स्विकार्नु पर्ने बोध भएपछि केही हदसम्म रोकिएको छ ।
‘नेयमारले मैदान बाहिर र भित्र यस योजनाप्रति समर्पित देखिन्छन् । उनले आफू पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)को खेलाडी हुनुमा खुशी मनाउनु पर्छ र च्याम्पियन्स लिग जित्न सक्दो प्रयास गर्नु पर्छ ।’ फ्रेन्च फुटबल विश्लेषक जोनाथन जोन्सन बताउँछन् ।
नेयमारको फुटबल बाहिरको जीवन समेत चर्चामा आउने गरेको छ । समस्या देखिने गरेका छन् तर उनले ती सबै पार गर्दै आएका छन् ।
गतवर्ष उनलाई ब्रजिलियन मोडेलमाथि बलात्कार तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सफाइ दिइएको थियो । यस वर्ष उनी आफ्नो जन्मदिनको पाटीको दुई दिन पश्चात लिग खेल गुमाउन बाध्य भएका थिए ।
‘ब्राजिलमा एउटा भनाइ छ । उनी अन्त्यहिन वाचा हुन् । उनलाई बालक नेयमार भनिन्छ । उनी ब्रजिलियन भनाइ अनुसार युवक होइनन् तर उनी युवक बन्नु पर्छ । उनी अब माथी उठेर सोच्नु पर्छ ।’ कलासले भने, ‘उनी मैदानमा हुँदा सधैं आफ्नो शतप्रतिशत दिन्छन् । मैले आजसम्म कुनै पनि प्रशिक्षकबाट उनी बारे नराम्रो सुनेको छैन ।’
सन् २०१८ र २०१९ को सिजनमा उनी घाइते बने । उनी घाइते भएपछि रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर युनाइटेडले पिएसजीलाई प्रतियोगिताबाट नकआउट गरिदिए ।
‘यसले उनको आगामी यात्रालाई झनै महत्वपूर्ण गराइदिन्छ । विगतका विफलतामा उनको उपस्थिती नहुनुले अबको यात्रामा उनलाई सबैको नजरमा पारिदिएको छ ।’ जोन्सनले भने ।
कोभिड–१९ को महामारीले प्रतियोगिताको ढाँचा बदलिदिएको छ । दुई लेगको नकआउट खेल एक लेगको गराईएको छ । यो पिएसजीका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ । कभानीको अनुपस्थिती र एम्बाप्पे घाईते हुनुले झनै नेयमारको काँध भरिएको छ ।
प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा एटलान्टालाई र सेमिफाइनलमा एट्लेटिको मड्रिडलाई पराजित गरे ‘विनर टेक्स अल’ फाइनलमा के हुन्छ, कसैले सोच्न सक्दैन ।
जोन्सनलाई यो वर्ष विगतका विफलता भुलेर कतारी लगानीकर्ताको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने जस्तो लाग्दछ । यस्तै, कलासलाई भने यो सिजन नेयमारको पेरिसमा बाँकी २ बर्षको समयलाई निर्धारण गर्ने सिजन लाग्दछ ।
नेयमारको सम्झौता सन् २०२२ मा सकिँदै छ र सोही वर्ष कतारमा हुने विश्वकप, जुन उनको ब्रजिलियन जर्सीमा अन्तिम प्रतियोगिता बन्न सक्छ । त्यसबेला सम्मका लागि यो समय उनको लागि ‘गर या मर’को अवस्था रहेको छ ।
‘हामीले सधै यो बर्ष उनको हो भन्छौं, तर अझैसम्म त्यो हुन सकेको छैन । उनी अहिले २८ वर्ष पुगिसके । उनी यतिबेला आफ्नो करिअरको महत्वपूर्ण अवस्थामा हुनुपर्दथ्यो, तर उनी छैनन् । यो उनको लागि अन्तिम मौका हो ।’ कलास विश्लेषण गर्छन् ।
पीएसजीले आफ्नो यात्रामा अनगिन्ती ‘ट्विस्ट’ भोगेको छ । विफलतामा दुख भोगेको छ, क्रोधित समर्थक देखेको छ । तर अब यस क्लबको सुखदायी अन्त्यको कथा लेख्ने जिम्मा क्लबका ‘हिरो’ नेयमारको हातमा छ ।
-सीएनएनबाट अनिष भट्टराईको अनुवाद